Diyaarad Nooca Wax basaasa ah, oo aan la garanaynin cidda leh oo haayada somaliland dul mareysa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Diyaarad Nooca Wax basaasa ah, oo aan la garanaynin cidda leh oo...
Diyaarad Nooca Wax basaasa ah, oo aan la garanaynin cidda leh oo haayada somaliland dul mareysa
Diyaarad Nooca Wax basaasa ah, oo aan la garanaynin cidda leh, ayaa 4-tii maalmood ee u dambeeyay dul wareegaysay gobolada Somaliland.
Diyaaradda oo kasoo kacday madaarka Djibouti, Sumadeeduna tahay Super king 350(BE30) ayaa iyadoo joog hoose (19-22000ft)ku duulaysa, Waxay si aad ah ugu wareegtay inta u dhaxaysa Fiqifuliye iyo Carmaale oo ka tirsan Gobolka Sanaag. Sidoo kale waxay ku dul wareegtay deegaano ka tirsan gobolka Awdal sida Lughaya iyo nawaaxiga Boorama.
Duulimaadka qarsoodiga ah ee diyaaradani ku kormeertay Deegaanada Somaliland waxay kusoo beegantay xilli ay soo baxday warbixin sheegaysa in Maraykanku doonayo inuu saldhig ku yeesho Somaliland, arrintaasi oo uu qoray Michael Rubin, oo ka tirsan Machad ku yaala maraykanka, Maqaalkaasiina waxaa daabacay wargeyska National Interes.
Ma jiro War kasoo baxay xukuumadda Somaliland, lamana oga inay la soco dhaqdhaqaaqa diyaaraddan iyo in kale.